बन्ला त समयमै जनताको संविधान ? | BIVAS
← ‘पञ्चेश्वरमा गम्भीर राष्ट्रघात’
गोरखा महोत्सवको तयारी तिब्र →
बन्ला त समयमै जनताको संविधान ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणाको मिति नजिकिंदै जांदासमेत राजनीतिक पार्टीहरू त्यसप्रति गम्भीर नहुंदा संविधान निर्माणको प्रक्रियाले गति पाउन सकेको छैन । सातवटा विषयगत समितिले आफ्नो अवधारणा संविधानसभामा पेश गरिसके पनि चारवटा समितिले अवधारणा पेश गर्न सकेको छैन । जसका कारण संविधानसभाले सातौंपटक आफ्नो कार्यतालिका परिवर्तन गरेको छ । पछिल्लोपटक मंसिर १ गते सोमबार कार्यतालिका सातौंपटक परिवर्तन गरिएको छ । छैटौंपटकको कार्यतालिका अनुसार कात्तिक मसान्तभित्र सबै विषयगत समितिले आ-आफ्नो अवधारणा पेश गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेन ।
संविधानसभाको मुख्य समिति भनिने संवैधानिक समिति, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड, शाषकीय स्वरूप र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बांडफांड समितिले मस्यौदाको आधा कामसमेत पूरा गरेको छैन । राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड समितिका सभापति लोकेन्द्र बिष्टमगरले नेपाली कांग्रेस एमालेलाई समयमै पार्टीको अवधारणा पेश गर्न भने पनि उनीहरूले पेश गरेका छैनन् । एमालेले केही दिनअघि १५ प्रदेश सहितको संघीय स्वरूप प्रस्तुत गरेको भने पनि त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन भनी विरोध भइरहेको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले भदौ १८ गते नै राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरिसकेको छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म यससम्बन्धी विषयमा आजसम्म कुनै अवधारणा तयार पार्न सकेको छैन । कांग्रेसकै अवरोधका कारण समितिले अवधारणा तयार पार्न नसकेको हो । समितिका सभापति मगरले पटक-पटक ताकेता गरे पनि कांग्रेसले टेरपुच्छर लगाएको छैन । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कांग्रेस संघीयता र स्वायत्तताको विषयमा प्रस्ट छैन । ऊ देशलाई अझै पनि केन्द्रीकृत प्रणाली अनुसारै चलाउन चाहन्छ र २०४७ सालकै संविधानलाई टालटुल पारेर काम चलाउन चाहन्छ । त्यसैकारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।’ संघीयता र स्वायत्तताको मुद्दा माओवादीको भएकाले उसलाई असजिलो पार्न कांग्रेसले संविधान निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको बताइन्छ । माओवादीले समयमै आफ्नो अवधारणा पेश गरे पनि विशेषतः एमाले र कांग्रेसकै कारण समस्या उत्पन्न भएको काम हुन नसकेको बताउंछन्, राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड समितिका सदस्यहरू ।
उता, प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बांडफांड समितिमा समेत कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलकै कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूमा समझदारी नहुंदा समस्या उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूमा समझदारी नहुंदा समस्या भएको र अवधारणा बन्न नसकेको हो भन्छन् उक्त समितिका सचिव रामशरण घिमिरे । माओवादीले सामन्तको जग्गा राष्ट्रियकरण गरी भूमिहीनलाई वितरण गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रहरू स्थानीय तहको मातहतमा राख्ने र स्थानीय रूपमा पनि त्यसको आयस्रोतलाई व्यवस्थापन, आर्थिक अधिकार संघ र इकाइलाई दिने भन्ने प्रस्तावका विरुद्ध अरू दल उत्रिएका छन् । भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सवालमा कांग्रेसमात्रै होइन आफूलाई भूमिहीनको मसिहा बताउने एमालेसमेत सकारात्मक देखिंदैन । उक्त समितिका सभापति अमृता थापा भन्छिन्, ‘भूमिसुधारको विषयमा विशेषतः कांग्रेसका साथीहरू सकारात्मक नहुंदा समस्या उत्पन्न भएको हो । १० गते बुधबार अवधारणालाई पूर्ण रूप दिने तयारीमा छौं । यस समितिमा मुख्य गरी माओवादीले राज्यले भूमिसम्बन्धी विषयलाई अधिकरण गर्दा कुनै क्षति पूर्ति नदिईकन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्तावमात्रै गरेको छैन । सामन्तको जग्गा कब्जा गरेर बांड्नुपर्छ भनेको छ । तर, कांग्रेस र एमालेले भने जग्गा लिंदा मुआब्जा दिनुपर्छ र जग्गा जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइंदैन भन्ने प्रस्ताव राखेको छ । भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सवालमा उनीहरू प्रस्ट नरहेको माओवादी भनाइ छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘२० लाख भूमिहीनलाई भूमि दिन नचाहनु र उनीहरूलाई केवल भोटबैंकमात्र बनाउने नियतका साथ कांग्रेस र एमालेले गलत अडान राखेको छ ।’ दशैं अगाडि नै तयार भइसकेको अवधारणा अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्नुको पछाडि यही नै प्रमुख कारण हो भन्छन् उक्त समितिका सचिव घिमिरे । सभापति थापा भन्छिन्, ‘विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै काम गरिराखेका छौं, केही दिनभित्रै हाम्रो अवधारणाले पूर्णता पाउंछ ।’ आफ्नो समितिको ९५ प्रतिशत काम सकिइसकेको उनको भनाइ छ । राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी समितिले अवरधाणा तयार पारिसकेको भए अलि सहज हुने र त्यही आधारमा प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा राजश्वलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो भन्ने भनाइ पनि छ । उक्त समितिमा कांग्रेसकै कारण अवधारणा तयार हुन नसकेको हो भन्ने कुरामा समेत सभासद्हरू जानकार रहेका छन् ।
राज्यको शाषकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई नमान्ने भन्दै आएको छ भने कांग्रेस बेस्ट मिनिस्टर सिष्टमलाई कुनै पनि हालतमा राख्नुपर्ने बताउंदै आएको छ । माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र त्यो जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने माओवादी प्रस्ताव छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्ने बेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको वकालत गर्छ । संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेकाले यस्तो प्रणालीको सट्टामा कार्यकारी राष्ट्रपति, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, बहुंदस्यीय निर्वाचन प्रणाली, संघीय निर्वाचन, इकाइहरूको व्यवस्था गर्दा पूर्णतः नयां ढंगले गर्नुपर्नेमा माओवादीले जोड दिएको छ । एमालेले संसारमै नभएको मोडल प्रस्तुत गरेको छ । उसको मोडलअनुसार प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुनेछ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस प्रणालीको प्रयोग १९७० को दशकमा इजरायलमा प्रयोग गरिएको थियो । जुन धेरै समय टिक्न सकेन, पछि पुनः इजरायल कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा समावेश भयो ।’ ‘देशमा बढिरहेको अराजकता, दण्डहीनता रोक्न र वहुकेन्द्रको सट्टामा एउटै शक्तिकेन्द्र रहने गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनमत छ । त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन,’ भन्छन् माओवादी स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल । शीर्षनेतृत्वका बीचमा सहमति नभई काम गर्न नसकिने भन्दै यस समितिका सभापति शम्भु हजाराले काम अगाडि बढाएका छैनन् । राजनीतिक दलका शीर्षनेतृत्वबीच सहमति हुनेबित्तिकै काम अगाडि बढिहाल्छ । हामी त्यही समयको प्रतीक्षामा छौं । यस समितिको हालसम्म ७२ पटक बैठक बसिसकेको छ । सुशाषनका आधार, कानुनी शाषन पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, निर्णयमा तदारुकता, मितव्ययिता, उपयोगिता, निष्पक्षता, विकेन्द्रीकरण समानुपातिक समावेशी भ्रष्टाचार निवारणजस्ता विषयमा भने सहमति भएको सभापति हजारा बताउंछन् । हामीले पुरानोभन्दा नयां नै मोडल खोजेका हौं । तर, सहमति हुन सकेको छैन ।
सहमति गरेरै अगाडि बढ्ने सोच छ, निर्वाचन गर्ने भन्ने नै छैन उनले भने । राज्यलाई कस्तो बनाउने भन्ने निर्धारण गर्ने भएकाले यसमा रस्साकस्सी चल्ने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न ।
अन्योलमा संवैधानिक समिति
संविधान निर्माणको प्रमुख समितिका रूपमा रहेको संवैधानिक समितिले उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले समितिको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषय प्रवेश गराएर समस्या सिर्जना गर्ने गरेको सभासद्हरू बताउंछन् । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य तथा सभासद् वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले सभापति आचार्यले बेप्रसंगका कुरा समितिमा ल्याउने गरेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संविधानको नाम, प्रस्तावना, त्यसमा समेट्नुपर्ने विषय राज्यको प्रकृति र विशेषता संविधान संशोधन प्रक्रिया, राजनीतिक दलसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, संकटकालीन अवस्थाको प्रयोगलगायतका विषयमा यस समितिभित्र विवाद रहेको छ । माओवादीले जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको विषयलाई प्रस्तावनामा समेट्नुपर्ने बताउादै जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्तावना पेश गरेको छ । त्यस्तै, राजकीय सत्ता र सर्वाभौमसत्ता जनतामा निहित हुने कुरालाई जोड दिएको छ । संघीय गणतन्त्र नेपाललाई प्रतिबिम्बित हुनेगरी राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रगान, राष्ट्रिय जनवार, रंग निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ट अडान माओवादीको छ । तर, कांग्रेस र एमालेका सभासद्हरू जनयुद्ध भन्ने शब्दलाई मात्रै होइन त्यसकै आधारमा भएको परिवर्तनलाई समेत स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिंदैनन् ।
सभासद्हरूका अनुसार संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य नै विवाद बढाउन उद्यत् रहेका छन् । संविधान निर्माणभन्दा पनि विवाद झिक्ने, अलमल गर्ने गरेको बताइन्छ । उनकै पार्टी कांग्रेसले भने अहिलेसम्म अवधारणा बुझाएको छैन । अहिलेसम्म सबैभन्दा थोरैपटक बैठकसमेत यही समितिको बसेको छ । संवैधानिक समितिका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार यस समितिको बैठक ५९ पटकमात्रै बसेको छ । संवैधानिक समितिको सभापति बनाएर माओवादीले दुई-दुई ठाउंबाट चुनाव हारेका माधव नेपाललाई भित्र्याइएको भए पनि हैसियत बिर्सेर उनी कठपुतली सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेपछि लामो समय यही समिति सभापतिविहीन रह्यो । ९ जेठ २०६६ मा रिक्त भएको सभापति पद १२ भदौमा आएर मात्रै पूर्ण भयो । नियमतः माओवादीले पाउनुपर्ने संवैधानिक समितिको सभापति पद अन्ततः कांग्रेस, एमालेको कोपभाजनमा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको र सबै प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमेत सदस्य रहेको यो समितिको कतिपय बैठक त कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ । सबै राजनीतिक दलले इमानदार देखिने हो भने तोकिएकै समयमा समितिले मस्यौदा तयार गर्नसक्ने सभापति आचार्य बताउंछन् । तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म मस्यौदा नबुझाउंदा समेत उनले ताकेता गर्ने आंट गरेका छैनन् । समितिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रचार गरिए पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको स्वयं समितिका सचिव ढुंगाना बताउंछन् । भन्छन्, ‘केही काम अगाडि बढेको छ, तर पूर्ण भएको छैन । सातवटा विषयगत समितिले बुझाएको अवधारणा पनि विवादरहित बन्न नसकेको सन्दर्भमा बांकी रहेका चारवटा समिति पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । जेहोस् नेपाली जनताले २०६७ साल जेठ १४ गते नयां संविधान पाउंछन् वा पाउंदैनन् त्यसको कुनै ग्यारेन्टी नभएको यो परिप्रेक्ष्यमा आशा गर्ने ठाउं भने बांकी नै छ । आशा गरौं जनताको संविधान अवश्य लेखिनेछ ।
Posted by CHINTAN on डिसेम्बर 1, 2009 in Analysis, BLOG
2 responses to “बन्ला त समयमै जनताको संविधान ?”
डिसेम्बर 2, 2009 at 2:45 बिहान
yes aba antim asha bhaneko waiting garnu nai ho. आशा गरौं जनताको संविधान अवश्य लेखिनेछ । bhanera.
डिसेम्बर 2, 2009 at 3:01 बिहान
Jati kura gare pani akhir sambidhan dine India le nai ho yi Neta haru sabai kathaputaki matra hun.